မင်္ဂလာဒုံတွင် ဘီယာသောက်ပြီး စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ လူသတ်မှုဖြစ်ပွား - Yangon Media Group
မင်္ဂလာဒုံတွင် ဘီယာသောက်ပြီး စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ လူသတ်မှုဖြစ်ပွား
မင်္ဂလာဒုံ မြို့နယ်အတွင်း သူငယ်ချင်းချင်း ဘီယာသောက်ပြီး စကားများရန် ဖြစ်ရာမှ စကေဘာဖြင့် အချက် ပေါင်းများစွာထိုးသတ်မှုကြောင့် တစ်ဦးသေဆုံးမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ စမ် ကြီးဝရပ်ကွက် ပိတောက်လမ်းနေ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီမောင်း မြတ်သူစိုး(၃ဝ)နှစ်မှာ တစ်ရပ်ကွက်တည်းနေ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ စိုးမင်းထွန်း (၃ဝ)နှစ် (ဈေးရောင်း) ၏ နေအိမ်တွင် ဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံးနေကြောင်း ဇန်နဝါရီ ၃ဝ ရက် နံနက် ၁ နာရီခန့်က သတင်းအရ တာဝန်ရှိသူများက သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့သည်။
မြတ်သူစိုးမှာ နေအိမ်ရှေ့ခန်းအတွင်း၌ ရင်ဘတ်ထိုးသွင်းဒဏ်ရာလေးချက်၊ ဝမ်းဗိုက်ထိုးသွင်း ဒဏ်ရာနှစ်ချက်၊ ဝဲလက်မောင်းထိုးသွင်းဒဏ်ရာလေးချက်၊ ဝဲလက်ဖဝါးပြတ်ရှဒဏ်ရာ တစ်ချက်၊ ယာပေါင်ထိုးသွင်း ဒဏ်ရာတစ်ချက်၊ အောက်မေးရိုးပြုတ် ဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိသဖြင့် အနီးပတ်ဝန်း ကျင်နေထိုင်သူများကို မေးမြန်းရာ အခင်းဖြစ်ညက သေဆုံးသူ မြတ်သူစိုးနှင့် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ စိုးမင်းထွန်းတို့နှစ်ဦး ဘီယာအတူသောက်စားရင်း စကားများ ရန်ဖြစ်စဉ် စိုးမင်းထွန်းက စကေဘာ ဖြင့် ထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သေ ဆုံးသူကို အင်းစိန်ဆေးရုံပို့ထား ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ စုံစမ်းသိရသည်။
မင်္ဂလာဒုံမြို့မရဲစခန်းမှ ရဲ အရာရှိတစ်ဦးက ”ကျူးလွန်သူကို မိထားပြီ။ နယ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင် တွေက သတင်းရတာနဲ့သွားဖမ်းလိုက်တာ။ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း ဘီယာသောက်ရင်း မူးပြီးတော့ စကားများရန်ဖြစ်ရာကနေ လူသတ်မှုအထိ ဖြစ်သွားတာပဲ”ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဇန်နဝါရီ ၃ဝ ရက်တွင် ပြောသည်။ ဖမ်းမိသူ စိုးမင်းထွန်းကို မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တရားရုံးတွင် ချုပ်ရမန်ယူထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။ ယင်းအမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး မင်္ဂလာဒုံမြို့မရဲစခန်းမှ (ပ) ၁၂၃/ ၂ဝ၁၉၊လူသတ်မှု ပုဒ်မ- ၃ဝ၂ ဖြင့် စိုးမင်းထွန်းကို အမှုဖွင့် အရေးယူထားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဆရာ၊ ဆရာမအချို့ ၁၄ နှစ်တိုင်တိုင် အလုပ်မဝင်ဘဲ ကျောင်းတက် ပျက်ကွက်ပြီး လစာ
စွန့်လွှတ်မြေဧက ၁၃ဝဝ အား အမြန် ချထားပေးရေးအတွက် ရေကြည်မြို့မှ မြေယာမဲ့ တောင်သူများ ဆန္ဒထုတ်ေ?
မြေ၊ အဆောက်အအုံကာလတန်ဖိုး စိစစ်သတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့တွင် ပြည်သူ့ကိုယ်စားပြုပုဂ္ဂိုလ်များ ထည့်သ??
အစိုးရသက်တမ်းသုံးနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်စည်ပင်လုပ်ဆောင်မှုများအနက် ဂုဏ်အယူရဆုံးလုပ်ဆောင်မှုမရှိသေးဟု မြို့တော်ဝန်ဆို
ကျောင်းဖွင့်ရာသီ မန္တလေး ဆိုင်ကယ်ဈေးကွက်တွင် အရောင်းအ၀ယ် သွက်နေ
လင်မယား ရန်ပွဲဖျန်ဖြေသူအား ဓားဖြင့် ခုတ်သတ်ပြီး ကိုယ့်အိမ်ကိုယ် မီးရှို့ထွက်ပြေးမှု ပဲခူးတွ
မီလန်အသင်းနှင့် အီတလီစူပါဖလားပွဲကို နောက်ခံလူဘီနာတီယာ လွဲချော်